Ahoana ny fomba hanombohan'ny fanombohana ny fanombohana ny Product Hunt | Martech Zone
Ahoana ny fanombohan'ny fanombohana ny fanombohana ny Product Hunt
Sabotsy, Janoary 7, 2017 Sabotsy, Janoary 7, 2017 Andrew Gazdecki
Ny fizotran'ny fanombohana ho an'ny fanombohana eo amin'ny indostria rehetra dia eran'izao tontolo izao: manaova hevitra tsara, manaova kinova fampisehoana ho fampirantiana, hisarihana mpampiasa vola ary avy eo tombony raha vao mahatratra ny tsena amin'ny vokatra vita ianao. Mazava ho azy, rehefa nivoatra ny indostria, dia toy izany koa ireo fitaovana. Tanjon'ny taranaka rehetra ny mamorona fomba vaovao hisarihana ny fanombohana ho hitan'ny besinimaro.
Ny vanim-potoana teo aloha dia niantehitra tamin'ny mpivarotra isam-baravarana, ny fandefasana mailaka ary ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra sy radio handefasana vokatra. Raha mbola misy ny sasany amin'ireny fitaovana ireny ankehitriny, dia ilaina tokoa ny fanodinana maoderina mba hahafahan'ny fanombohana anio mamorona toerana amin'ny tsena be atao.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Alex Turnbull an'ny Groove tamin'ny taona 2016, ny mpanorina sy ny CEO an'ny Product Hunt, Ryan Hoover, dia nanoritsoritra ny filozofia nolovain-drainy: Mitadiava lavaka, ary fenoy
Nahita lavaka lehibe i Hoover ary nanamboatra fomba hamenoana azy izy. Toerana fihaonana ho an'ireo izay manana fanombohana hanombohana, miantehitra amin'ny vava vava ny tranokala hanamafisana na hampihena ny tranga tsirairay amin'ny alàlan'ny fidinana na fidinana avy amin'ny mpampiasa. Raha azonao atao ny mahazo upvotes ampy hanalavirana ny sakafo atsy ho atsy, izay hanombohana ny fanombohana rehetra, dia hifindra amin'ny pejy eo alohan'ny tranokala ianao sy ny fahana Featured.
Ny isan-karazany ny vokatra atolotra manerana ny toerana. Hankafy ny telefaona sy ny fampiharana finday ireo teknisianina, raha misy boky sy zavatra hafa azo jerena. Na aiza na aiza Alefaso glitter ny fahavalonao nanomboka koa. Tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nanombohan'ny tranonkala ny media sosialy, nanery ny mpamorona hametraka ilay tranonkala ny fahalianana amidy.
Aleon'ilay tranonkala asongadin'ireo fanombohana izay 'vaovao' - tsy ny ezaky ny mpamorona voalohany ihany, fa ny entana izay nohavaozina be tamin'ny orinasa malaza. Avelan'izy ireo hamoaka ny fanombohany ihany koa ny mpamorona miaraka amina zavatra izay tsy dia fantatra loatra, na dia tsy vaovao ara-teknika aza ilay zavatra.
Ny fampiharana izay namerimberina indray dia afaka mahafeno fepetra ho voatanisa. Raha mpanoratra ianao, dia mety tsy ho anao ny Product Hunt, satria tsy manaiky lahatsoratra sy lahatsoratra bilaogy ilay tranonkala. Ny serivisy fifanekena ihany koa dia tsy ekena amin'ny tranokala.
Voaporofo fa tena mahomby, miaraka amin'ny saika Mpankafy 170,000 XNUMX tao amin'ny Facebook sy Twitter hatramin'ny volana mey lasa teo ary profil Twitter valo tsy nahagaga.
Mbola mahatsiaro ho tototra ve? Nahazo torohevitra vitsivitsy izahay hahazoana antoka fa tsara ny zavatra niainanao Product Hunt:
Mikaroha vokatra mitovy amin'izany
Ity no dingana voalohany tsy afa-mandingana alohan'ny handaminana ny fandefasana amin'ny Product Hunt, indrindra raha afisy rookie ianao. Ny fanokanana fotoana hikarohana sy hahitana ny fomba nitobian'ny orinasa sy ny olon-kafa ny asany, hatrany amin'ny taglines, dia teboka tena ilaina. Mariho ireo fehezanteny mahaliana ireo, fa aza adino ny fomba namoronany ny pejin'izy ireo. Ny singa rehetra dia tokony hodinihina alohan'ny handehananao, toy ny fandosirana fotsiny ny tenanao any ivelany dia hiafara amin'ny loza. Mahaiza mandanjalanja.
Rehefa nanandrana nanangana ny Product Hunt ny orinasako dia tokony ho 4 taona izahay ary tafatsangana. Niezaka nanao izay fara herinay izahay hampianarana ireo mpampiasa fa ny finday DIY anay mpanamboatra rindrambaiko dia serivisy lehibe fa ny zava-baovao tsy hoe zava-baovao tanteraka mitarika antsika tsy hanana fandefasana mahomby. Ka, ny hevi-dehibe eto, dia alao antoka fa mandefa zava-baovao ianao fa tsy zavatra efa napetraka tao amin'ny Product Hunt taloha izay tsy nisy valiny lehibe.
Tsara ny maka lesona avy amin'ny lesoka nataonao. Aleo mianatra amin'ny hadisoan'ny hafa. Warren Buffett
Tadiavo ireo mpampita
Làlana iray hafa mankany amin'ny fahombiazana eo amin'ny tranonkala ny fahitana influencers - olona izay afaka liana amin'ny fanombohana vaovao izay vao navoaka tao amin'ilay tranonkala. Izany dia fenitra ho an'ireo mifandraika amin'ny orinasa manosika ny startup hitifitra mailaka ho an'ny mpiasan'izy ireo mampientanentana azy ireo amin'ny tanjona ny fivoarana vokatra vaovao. Ho an'ny isam-batan'olona dia tsara tanteraka ny manao toy izany amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana sy namana. (Na dia tsy mahafehy mailaka aza ny nenitoanao. Isaky ny mifidy, tadidio.)
Misy fetrany ihany anefa. Product Hunt dia tsy mamela ny orinasa hividy toerana fotsiny amin'ny pejin-tranonkala. Tsy maninona ny mahatalanjona ny firaketana an-tsoratra, dia mbola mila mahazo laharana ambony amin'ny alàlan'ny upvotes toa ny olon-drehetra izy ireo.
Ataovy ao an-tsaina hatrany ny hafainganana rehefa mamorona zavatra ho an'ilay tranonkala
Tsy toy ny tranonkala mitovy amin'izany, ny algorithm an'ny Product Hunt dia miankina amin'ny hafainganana. Raha vantany vao mahatratra ny misasakalina PST ny famantaranandro, dia manomboka ny andro vaovao ary hodiovina ireo mpifidy isan-jato isan'andro. Noho izany, zava-dehibe ho an'ireo mpamorona ireo ny mahazo antoka fa voapetraka sy vonona ny zava-drehetra raha vao navoaka ilay vokatra ary miantra ny mpampiasa ianao. Satria ny Product Hunt dia tsy mamela famerenana raha tsy amin'ny tranga sasany (voalaza etsy ambony), izany andro izany dia manapa-kevitra raha toa ka mahomby na tsia ny fanombohanao.
Ny mpampiasa dia azo ampiasaina amin'ny tombotsoanao
Ireo mpamorona sy mpamorona manan-tsaina dia mampiasa famerenana hanamafisana ny vokatra iray. Ny mpamorona dia nitantara ny fomba nanatsarana ny kinova beta tamin'ny app finday tamin'ny famakiana ny fanehoan-kevitra tao amin'ilay tranonkala sy ny fanamboarana ireo bibikely. Ny pejy FAQ an'ny Product Hunt dia manitrikitrika fa ny fampiharana iray dia tsy azo avela raha toa ka 'be dia be' ireo fanavaozana - fisehoan-javatra vaovao manan-danja tokoa fa tsy fanovana ao na etsy. Holavin'ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina ny fanavaozana kely, koa tadidio izany.
Ny ohatra misy ny endri-javatra ekena dia mihazakazaka ny gamut manomboka amin'ny interface interface nivelatra ka hatramin'ny fahazoana misimisy amin'ny sehatra maro, angamba kinova finday vaovao an'ny tranokala. Na logo vaovao aza isaina!
Jereo fotsiny Minibox. Ny fampiharana fizarana rakitra dia roa taona izao ao anatin'ny fihodinana fahatelo, miaraka amin'ny kinova maro ho an'ny sehatra samihafa rehefa avy natomboka ho toy ny sehatra Mac-irery.
Fotoana marina ny fanombohanao
Ireo webmaster manan-tsaina dia hanao antoka fa hanomana tsara ny fandefasana ilay zavatra. Ny tantara mahatsiravina momba ny fanombohana dia tsy vonona amin'ny fiakaran'ny fifamoivoizana noho ny fandefasana amin'ny Product Hunt dia mahazatra, toy ny mpamorona Ship Your Enemies Glitter izay tototry ny tombotsoam-bahoaka.
Hamarino tsara fa rehefa mikasa ny handefa ianao, dia apetrakao amin'ny zavatra tianao ny zava-drehetra. Raha tsy vonona ianao ary mety hanana olana amin'ny fampiharana ireo mpampiasa, dia miomàna amin'ny alàlan'ny downvotes marobe manondro bibikely sy misintona havia sy havanana. Avy eo dia ho eo am-pelatanan'ny mpitantana ny tranokalan'ny tranonkala ny fiafaran'ilay fampiharana rehefa mandefa mailaka azy ireo miaraka amina kinova nohatsaraina ianao.
Mila fantatry ny mpitantana fotsiny ny zava-drehetra kasainao hatao ao amin'ny Version 2.0 mba hanomezana izay tsara azo resena. Hamarino tsara fa manana ohatra ianao.
Aza mandeha irery fa tsy misy fifandraisana amin'ny haino aman-jery
Ireo mpampiasa veteran Product Hunt dia mahafantatra ny fanombohana fanombohana ary manana fifandraisana amin'ny haino aman-jery izay manampy amin'ny fanaovana dokambarotra izy ireo. Tsy midika izany hoe tsy afaka maka tahaka azy ireo ianao. Fantatrao ve ireo bilaogera na mpanao gazety izay nandrakotra ny vokatrao talohan'izay tamin'ny hevitra tsara? Manamboara mailaka iray hahasarika ny sain'izy ireo momba ilay fandefasana vaovao ary andefaso izy ireo amin'ny andro fandefasana.
Ireo hafatra aza mety ho mandeha ho azy mba hitehirizana fotoana kely amin'ny tokony ho andro iray be atao. Fomba mora iray itondrana ny fanombohana vaovao eo imasomaso misimisy kokoa miaraka amina fandrakofana tsara, ary ahazoana upvotes bebe kokoa noho izany.
Hevitra farany sy torohevitra
Ny fitadidiana an'izany rehetra izany ao an-tsaina dia zavatra be dia be hodinihina ho an'ny rehetra, mainka moa fa ilay rookie Product Hunt. Raha vonona ianao, ny fiatrehana izay atorin'ny mpampiasa anao dia fotoana fohy. Voatery niaritra taorian'ny fanombohana lehibe nandeha haywire? Tsy misy olana, andao hampita ireo fanavaozana ho an'ny mpitantana ny fiarahamonintsika. Tsy voaomana amin'ny zanabola lehibe kokoa noho ny andrasana? Lesona nianarana amin'ny manaraka. Rehefa dinihina tokoa, mpampiasa marani-tsaina mianatra avy hiccups sy ny lesoka mba ho tsara kokoa amin'ny manaraka. Mendrika ny ezahina izany.
Ireo ohatra ireo, na tsara na ratsy, dia mampiseho ny herin'ny Product Hunt. Izay mpandraharaha maniry handefa fanombohana dia tsara raha mijery ny sanda natolotry ny tranonkala. Ny fanombohana vokatra tsotra dia mety ho lohataona hahombiazan'ny orinasa. Raha vonona sy vonona ny handeha ianao, dia ny tombony azo avy amin'ny Product Hunt no tianao. Mirary anao ho tsara vintana!
Tags: mpanamboatra rindrambaikofandefasanaminiboxfihazana vokatraProduct launchprodthuntstartupfampiroboroboana ny fanombohana
Martech Zone: Tongasoa eto amin'ny Publication martech vaovao-ko!